asalsashan » सम्झनामा अछाम सम्झनामा अछाम – asalsashan
हेलिकोप्टर र प्रधानमन्त्री ल्याउने सिडिओ
२०५१ सालको अन्त्यतिरको कुरा हो । म भूमि सुधार मन्त्रालयमा उपसचिवमा कार्यरत थिए । अचानक सिडिओ बनेर जिल्ला हाक्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक सल्लाह प्राप्त भयो ।
त्यस्को केहि दिनमै एकलट सिडियोको सरुवाको हल्ला फैलियो । म जुम्लाको सिडियोमा परेछु । गृह मन्त्रालयमा प्रशासन शाखाको उपसचिवलाई भेट्न भए । उहांले जुम्लामा कार्यरत प्रजिअ शंकर पाण्डेसंग टेलिफोनमा कुराकानी गराई दिनु भयो । पाण्डे सिडिओ सापले निकै सहयोगी भावनाले मलाई जिल्लाको बस्तुस्थितिको ब्रिफिंग गर्नुभयो । यो जिल्लामा स्वागत छ भनी टेलिफोन राख्नु भयो ।
अर्कोदिन, गृह मन्त्रालयका उनै प्रशासन शाखाको उपसचिवले प्रजिअमा सरुवा भएको पत्र लिन आउन आग्रह गर्नु भयो । गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्रमा म अछाम जिल्लाको प्रजिअमा सरुवा भएको रहेछु । ती उपसचिव मित्रले पनि केहि हेरफेर भएको कुरा बताउनु भयो ।
सो पत्र बोकेर गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगे । सो बखत गृहमन्त्री के.पी.शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । उहांले राम्ररी मलाई असल काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयबाट आबश्यक सहयोग उपलव्ध हुने कुरा बताउनु भयो । म गृहमन्त्रीसंगको भेटबाट सन्तुष्ट र उत्साहि भए । त्यसपछि मेरा पाईला गृहसचिवको कार्यकक्षतर्फ मोडिए ।
सो बखत गृहसचिव भोजराज पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । उहांले मलाई प्रजिअ हुनु भएकोमा बधाई भन्दै बिस्तृत कुराकानीका लागि भोलि बिहान निबासमा भेट्न आउन आग्रह गर्नुु भयो । म बिदा भए ।
यस्ता आबेगहरु मेरो मनमा करिब ५।१० सेकेण्ड मडारिए । तत् पश्चात आफैलाई सम्हाले । संझिए, म त प्रजिअ पो हु त । तब मैले आफुलाई परिचित गराउदै पालो अनुसार जहाजको ढोकाबाटअछामको पबित्र भूमिमा पहिलो पटक पाईला राखे । ती प्रहरीले खुट्टा बजारे, कराए, हात यसो उसो गरे । अगाडि जाउ हजुर भनेर एयरपोर्टको टावरतर्फ लगे । अहिले संझिदा उनले खुट्टाको ताल मिलाएर जय नेपाल भनी मलाई प्रहरीको अनुशासन अनुसार अभिवादन गरेका रहेछन् । उनी मेरो अंगरक्षकमा खटिएका हबलदार साप रहेछन् । मलाई तालीमको अभावमा कसरी अभिवादन फर्काउने भन्ने जानकारी नरहेको अनुभूति गरे । पछि उनै हवलदार सापले सेना वा प्रहरीले सलाम गरेमा टोपी लगाएको अबस्था भए सुरक्षाकर्मीले जस्तै सलाम गर्ने र टोपी नलगाएको अबस्थाभए दुबै हात तन्काएर शरिरलाई केहि तन्काए झै गरी अभिवादन फर्काउने भनी सिकाई दिए ।
मैले सोधे, अघि किन हेरेको ? उनले भने सिडिओ अफिस खुल्यो कि भनेर हेरेको । मैले सोधे, के काम छ ? यहि सवाल जवाफमा यावत कुरा जानकारी भयो । ती टाढाबाट नागरिकता लिन आएका अछामी रहेछन् । उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिने म सिडिओ उनको कुरा सुनेर पानी पानी भए । चाडैनागरिकतापाए चाडै घर गएर एक गास टिपौंला, मंगलसेनको होटलमा पैसा भएपो खानु जस्तो भाव बुझेर म खत्रक्कै भए ।
मंगलसेन दरवारकै दुईवटा कोठामा बस्ने जोशी भन्ने सुव्वासाहेब र एैरे भन्न वहिदार साहेबलाई वोलाए । उनीहरुलाई यी अछामीको नागरिकता बनाई दिन भने । तर, तिनले अहिले साढे सात मात्रै बजेको, दश बजेपछि बनाउन सकिने जवाफ दिए । लामो समयको गलफत्ती पछि ८ बजे ती अछामीको नागरिकता बन्यो । हातमा नागरिकता पाएपछि औधि खुसी भएका ती अछामीले पबित्र हृदयले मलाई आर्शिवाद दिएर घरतिरकुदे ।
यसैगरी, म अछामको प्रजिअ हुँदा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाले मंगलसेन र साफेबगरको स्थलगत भ्रमण गर्नु भयो । यस्मा मैलै स्थानीय नेता र सुरक्षाकर्मीबाट ठूलो सहयोग पाए । म उहांहरुप्रति श्रृणी छु ।
यसरी म अछाममा सिडिओ हुदा जिल्लामा हेलिकोप्टर ल्याउने र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउने सफल सिडिओ भनेर पनि टिप्पणी गरेको सुन्दा साहै खुसीको अनुभव गर्ने गरेको छु ।
एकदिन अछामको सिडिओ कार्यालयको फलैचामा बसी रहेको थिए । अर्का ज्येष्ठ नागरिकले एउटा लोटा लिएर आउनु भयो । मलाई अभिवादन गरेर लौ सिडिओ यो दहि खाउ भन्नु भयो । मैले कुनै कुरा नसोची सो दहि पिए । त्यसपछि सोको कारण सोधे । फेरी जवाफ पाए, भैसी व्याएर चोख्खिएपछि मोहिपार्न ठेकीमा हालेको दहि पहिला राजालाई खुवाउनु पर्ने रहेछ । हालका अछामी राजा सिडिओ नै हुन्, सोहि कारणले दहि खुवाउन आएको हुं भनैपछि म लाजले रातोपिरो भए । उहांलाई पनि गच्छै अनुसारको भोजन गराएर विदा भए ।
यस्ता सरल स्वभावका, राज्य प्रणालीप्रति आस्था भएका, आफ्नो परंपरा र संस्कृतिको जगर्ने गर्न लागी परेका मेरा आदर्णिय अछामीप्रति हार्दिक नतमस्तक छु ।
अछाममा म प्रजिअ हुँदा यो जिल्लालाई ड्राई जिल्ला अर्थात् मदिरामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । मदिराका विषयमा म कठोर थिए । मदिरा सेवक, उत्पादक र विक्रीकर्ताबाट जरिवानास्बरुप असुली भएको रु पांचलाख मंगलसेनको क्याम्पस संचालनार्थ दिएको थिए ।
एकपटक म साफे नेपालगंज हुँदै काठमाण्डौ जानु पर्ने भयो । नेपालगंज एयरपोर्टमा काठमाण्डौं जाने हवाई जहाज कुर्नुपर्दा भोक लाग्यो । एयरपोर्टकोआसपासमा रहेकोको एउटा रेष्टूरामा गएर चाउचाउ बनाई दिन अर्डर गरे । चाउचाउ पाक्दै थियो, सो रेष्टूरामा मदिरा विक्रीका लागि सिसीहरु राखेको देखे । मनले धत् भन्यो । केहि नबोली सो रेष्टूराबाट जुरुक्क उठेर अर्को रेष्टूरामा गएर चाउचाउको अर्डर गरेर खाएर हिडे । पछि म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिब भएर जिल्लाहरुको अनुगमन गर्दा पहिल्यै मेरो खाना खाने ठाउ मदिराबिहिन हुनुपर्छ भनेर निर्देश गर्दथे । वर्तमान दिनमा म मदिरा बिरौधी भै थुप्रै लेख प्रकाशित भएका छन् । यस्को प्रेरणाको स्रोत अछाम हो । मेरो असल कार्यको प्रेरणाको स्रोत अछामप्रति श्रृणी छु ।
फेरी नमस्कार शाहकै अगुवाईमा अर्कोपटक अछाम फर्किए । तुर्माखाँद गाउँपालिकामा युवा अध्यक्ष पुष्पराज शर्माको अति नै आत्मिय आतिथ्यतामा तहांपुगी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई पालिकको भूमिकाकोबिषयमा प्रशिक्षण दिए ।
सोहि बखत तुर्माखाँद गाउँपालिका रहेको श्री कालिकेश्वरी मा.बि.का बिद्यार्थी र शिक्षकका लागि बिशेष प्रबचन दिएको थिए । सो बखत तुर्माखादमा रहेको नमस्कार शाहको घर पुगें । उहांका बुवा, मुवासँग परिचय भयो । बुबा लोकेन्द्र बहादुर शाहसंग बिभिन्न बिषयमा साक्षात्कार भयो । श्री कालिकेश्वरी उच्च मा.बि. तुर्माखाँदका पुर्व प्राचार्य शाह वागेश्वरी धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।
तुर्माखाँदकै भ्रमणको दौरान कमलबजार नगरपालिकाका मेयर साहेबले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई म बाट प्रशिक्षण दिने मौका दिनु भयो । साथै, विनायक नगरपालिकका मेयरले पनि बाटो कुरेरै स्वागत गर्नु भयो । आम जनसमुदायबाट पाएको स्वागत त बेग्लै छ ।
यसरी, अब अछामको अर्को पटकको भ्रमणका लागि आतुर भएर बसेको छु । हेरौं, अछामी माताले कहिले अर्को साईत जुराउनु हुन्छ । अछाम र अछामी जनताको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।